हामीले २०७४ साललाई बिदाइ गरेर २०७५ सालमा प्रवेश गरिसकेका छौं। लामो संक्रमणकालपछि संविधान बनेर तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न भएको वर्षलाई बिदाइ गरिसकेपछि हामीसँग थप आशा र उमंग पलाएका छन्। अब
पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड गरियोस्
नेपालको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमध्ये कृषि, रेमिटान्सपछिको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको आर्थिक क्षेत्र हो पर्यटन। प्राकृतिक विविधताले भरिपूर्ण मानिएको नेपालमा पर्यटनका हिसाबले प्रशस्त सम्भावना छन्। मानव निर्मितभन्दा धेरै प्रकृतिको उपहारका रूपमा
धेरै उतारचढावका बीच हाम्रो माझबाट २०७४ साल सकिएको छ। आज २०७४ साल बिदा भएर भोलिबाट २०७५ साल शुरू हुँदै छ। नववर्ष आगमनको यो पूर्वसन्ध्यामा नयाँ वर्ष २०७५ लाई स्वागत छ।
दलितको जवानी चल्छ तर पानी किन चल्दैन ?
मुलुकी ऐन लागू भएको वर्षौं भयो। वर्ग व्यवस्थालाई सरापेको वर्षौंक भयो। मुक्तिका कुरा गरेर पदमा पुग्ने हजारौं भए तर आजका दिनसम्म दलितप्रतिको दुव्र्यवहार जीवितै छ, जसले हामी मानवलाई गिज्याइरहेको छ।
हामीले कहिलेसम्म जोखिम मोल्ने ?
कालीगण्डकीको दुई जिल्ला जोड्ने झोलुङ्गे पुल जीर्ण हुँदा यहाँका बासिन्दा जोखिम मोलेर नदी तर्न बाध्य भएका छन् । आमसञ्चारमाध्यममा यो समाचार व्यापकरूपमा आए पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन।
प्रदूषण नियन्त्रणको काम प्रभावकारी बनाऊ
बढ्दो प्रदूषणले वातावरण दिन–प्रतिदिन दूषित हुँदै गएको छ । सवारीसाधनको कारण हुने प्रदूषण निकै हानिकारक मानिन्छ । हुन त सरकारी निकायबाट बढ्दो प्रदूषण नियन्त्रण गर्नको लागि प्रयास भएका छन् तर
काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणमा सरकार उदासीन
काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणमा सरकार उदासीन भएको पाइएको छ। विश्वसम्पदा सूचीमा रहेको काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण गर्ने कार्यमा सरकार उदासीन रहेको काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण अभियानले नै जनाएको कुरा समाचारमा आइरहेको छ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको ऐतिहासिक,